JM Zvishandiso Apk Dhawunirodha Android [GFX YeMitambo Yese]
Uri kuve nechinetso nekutamba mitambo pane yako Android kifaa? Kana hongu, saka isu tiri pano neyakanakisa inowanikwa GFX chishandiso chevashandisi. Nekudaro, kana iwe uchida kukwidziridza ruzivo rwako rwekutamba, tora JM Zvishandiso Apk pane yako kifaa uye unakirwe nemitambo zvakanyanya.
Sezvo iwe uchiziva, kune akawanda Android mitambo inowanikwa pawebhu, iyo iwe yaunogona kutamba pane yako Android. Mazhinji emitambo iyi anopa hunyanzvi hwepamusoro, asi pane zvinhu zvakawanda zvinowanikwa mune chero mutambo. Saka, nhasi tiri pano nechishandiso chitsva chekusimudzira hunyanzvi hwako.
Chii chinonzi JM Zvishandiso Apk?
JM Zvishandiso Apk chishandiso cheApple, icho chinonyanya kugadzirirwa ma Android gamers. Iko kunyorera kunopa mamwe epamusoro-chikamu masevhisi evatambi, kuburikidza nawo aunogona nyore kugadzirisa mutambo wako zvinoenderana nemanzwiro ako uye maitiro.
Mune chero Android mutambo, pane akawanda marongero sarudzo anowanikwa kune vashandisi. Nekudaro, iwe unogona kuwana yakapusa uye yakapusa masevhisi, kuburikidza iyo iwe yaunogona nyore kugadzirisa zvimiro izvi. Asi izvi zvigadziriso zvinogumira kune vatambi.
Nekudaro, haugone kupfuudza izvo zviripo, ndosaka tiri pano neJM Zvishandiso App. GFX Turu inopa mamwe epamusoro-nhanho masevhisi evashandisi, kuburikidza nawo aunogona kukwidziridza mutambo wako nyore uye unakirwe nemitambo zvakanyanya.
Mune ino application, iwe unowana akawanda maturusi, ayo vatambi anogona kushandisa kunatsiridza yavo yemitambo. Saka, tichaenda kugovana mamwe emabasa akakosha epurogiramu newe mese. Saka, gara nesu uye uwane ruzivo rwese nezvazvo.
Mumagadzirirwo emifananidzo, pane zvakawanda zvingasarudzwa zviripo kune vashandisi. Nekudaro, iwe unogona nyore nyore kuita shanduko muiyo Kugadziriswa, Graphic, FPS, Chimiro, Mhuka, Shadows, uye zvimwe zvakawanda. Iwe unogona kutanga nyore kugadzirisa pano uye nekuvandudza yako Gameplay.
Mazhinji emidziyo yepasi-ekupedzisira haatsigire mitambo yazvino nekuda kwemifananidzo yavo. Nekudaro, pano iwe unogona gadzirisa zvinoenderana neyako Android kuenderana uye tamba wakatsetseka mutambo. Uchishandisa chishandiso ichi, unogona zvakare kugadzirisa hunhu hwemifananidzo.
Kukanda nderimwe rematambudziko akajairika kuvanhu, ndosaka pano iwe uchizowana zero lag modhi. Mune ino modhi, chishandiso chinozoisa zviyero zvemitambo maererano neyako kifaa. Nekudaro, iwe uchanakidzwa nekutamba pasina dambudziko uye unakirwe.
Iyo app inopa GFX masevhisi emitambo yese, asi kune akakosha maficha anowanikwa kune PUBG vatambi. Pano iwe unowana yakakosha chikamu, kuburikidza iyo iwe yaunogona nyore kugadzirisa GFX marongero ePUBG-Nhare pane yako kifaa.
Iwe unofanirwa kusarudza iyo vhezheni yePUBG, iyo yauri kutamba pane yako kifaa. Paunenge iwe wasarudza, ipapo unogona kutanga kugadzirisa pasina dambudziko. Kune vatambi vePUBG ndeimwe yeakanakisa maficha enguva dzese, ayo aunokwanisa kuwana nyore nyore.
Nekuda kwenhamba yakawanda ye cache, mazhinji emidziyo anoshanda anononoka. Naizvozvo, pano iwe unowana chishandiso chinowedzera, kuburikidza icho iwe chaunogona kuongorora nyore yako Android. Iyo yekuvheneka maitiro inounganidza ese asingabatsiri cache kubva kune yako kifaa, iyo iwe yaunogona kubvisa nyore nekamwe chete tap.
Nekudaro, kune zvimwe zvakafanana maficha anowanikwa kune vashandisi, ayo aunogona kuongorora nekushandisa. Kana iwe uchida kuwana mukana kune ese masevhisi, saka JM Zvishandiso Dhawunirodha pane chako chishandiso uye wotanga kuongorora zvimwe zvinhu.
GFX TOOL BGMI uye Musoro weGFX Chishandiso, zvese zvishandiso zvinoshamisa, izvo zvakare zvinopa zvakafanana masevhisi kune vashandisi. Saka, kana iwe uchida kuwana mamwe akafanana maapplication, saka tinokurudzira maturusi aya.
zita JM Zvishandiso
zera 9.43 MB
Package Zita app.rizqi.jmtools
Developer Rizqi dD - Mapurogiramu
Rutsigiro Rushoma Runodiwa 5.1 uye Pamusoro
Maitiro EkuDhawunirodha JM Zvishandiso Android?
Kana iwe uchida kutora yazvino vhezheni yechombo, saka iwe une akawanda sarudzo. Asi pano isu tichagovana inokurumidza kurodha nzira yazvino vhezheni newe. Saka, kana iwe uchida kutora iyo apk faira pasina dambudziko, saka tsvaga bhatani rekutora pano.
Bhatani rinowanikwa kumusoro uye pasi peji rino. Kamwe iwe wawana bhatani, ipapo iwe unofanirwa kugadzira imwechete pombi pairi. Maitiro ekurodha pasi anozotanga otomatiki mushure mekunge pombi yagadzirwa.
Yemahara kurodha pasi nekushandisa
Yakanakisa GFX Turu Yea Android Gamers
Gadzira Akawanda Maitiro
Zvakareruka uye Nyore Kushandisa
Mushandisi-ane hushamwari Interface
Akakosha Zvimiro zvePUBG Vatambi
Mudziyo uye Game Booster
Kana iwe uchida kuita zvirinani kuita kubva kune yako kifaa mukutamba, saka JM Zvishandiso Apk ndiyo yakanyanya kunaka sarudzo iwe. Neichi chinoshamisa app, unogona kutanga nyore kugadzirisa mashandiro eApple yako.
Categories Apps, Tools Tags GFX Turu, JM Zvishandiso Apk, JM Zvishandiso App, JM Zvishandiso Download Post navigation
Championfy Apk Dhawunirodha YeApple [Tamba & Uwane Mibairo]
Kupukunyuka Dambudziko Rekupona Download Download For Android